Afaka mampiasa ddr4 ao ddr3 slot
afaka mampiasa ddr3l ao ddr3 slot
afaka mampiasa ddr4 ao ddr2 slot
IGT voalahatra ny fivoriana manokana ny tompon'ny petra-bola ny fifidianana ny tolo-kevitra niaraka tamin'ny hafa ny olana izay tokony ho tohanana sy ankatoavin'ny, ao anatin'izany ny fankatoavana ny IGT tahiry iombonana mizara, ny famaranana ny toe-piainana noho ny GTECH Holdings fifanekena, sy ny fandraisana ny takiana lalao fankatoavana izay ilaina mba handroso amin'ny Nevada Lalao dalàna. GTECH dia mandoa $4.7 lavitrisa amin'ny vola sy ny tahiry raha mihevitra ho manana ho $1.7 lavitrisa IGT trosa, ny fananany ny 80% amin'ny IGT shareholders mihazona ny sisa 20% afaka mampiasa ddr4 ao ddr3 slot.
10, nandritra Ny fanaovan-tsonia amin'ny MGM Grand Las Vegas, ny orinasa natambatra fifanarahana amin'ny loteria mpamatsy GTECH Holdings. Loteria sy ny filokana ny teknolojia mpamatsy GTECH mety hanova ny fahazoana ampy / fanononana tsy ampy amin'ny septambra 2014, mba hiarovana ny mampisambotra renivohitra ho an'ny $4.7 tapitrisa nila finalise ny fahazoana afaka mampiasa ddr3l ao ddr3 slot. Tsy ny fifanarahana dia manambatra ny GTECH Taniny sy ny IGT ho iray ny orinasa sy ho headquarteres any angletera afaka mampiasa ddr4 ao ddr2 slot.
Hahazo ny farany filokana vaovao avy any Calvin Ayre kambana slot shelving visy ny habeny. Miasa ny foiben'ny dia ho mitoetra ao Roma, Las Vegas sy Rhode Island kambana slot shelving kiraro fitoeran'entana. Ny orinasa ihany koa no nahazo bebe kokoa €850 tapitrisa misokatra bola, izay afaka misafidy ny fidirana kambana slot shelving efitra fandraisam-bahiny.